CL- Group H: Juventus oo xaqiiqsatay kaalinta koowaad ee guruubkan, halka Sevilla ay ku soo baxday kaalinta labaad… + SAWIRRO – Gool FM
(Yurub) 08 Dis 2016 – Kulammo ka tirsan guruubka H ee Champions League ayaa la ciyaaray, iyadoo kooxda kubadda cagta Juventus ay xaqiiqsatay inay ku soo baxday kaalinta koowaad ee guruubkan, iyadoo Sevilla ay ku soo baxday kaalinta labaad kaddib barbaro ay la gashay Lyon.
Juventus ayaa 2-0 uga adkaatay Dinamo Zagreb oo marti u ahayd, waxaana labadaas gool oo ay ku xaqiiqsatay kaalinta koowaad ee guruubkan u kala dhaliyey 52’daqiiq Gonzalo Higuain iyo 73’daqiiqo Daniele Rugani.
Haatan kooxda reer Talyaani waxa ay hubaal ka dhigatay inay ku soo baxday kaalinta koowaad ee guruubkan H, iyadoo leh 14-dhibcood.
Dhinaca kale kooxda Sevilla oo barbaro goolal la’aan 0-0 la gashay Lyon ayaa ku soo baxday kaalinta labaad ee guruubkan H, iyadoo leh 11-dhibcood.
CL- Group G: FC Porto oo ku soo baxday kaalinta labaad ee guruubkan kaddib markii ay xaaqday Leicester City… + SAWIRRO